မောင်တို့ မယ်တို့ ဘာများပြောကြမလဲဟင်! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » မောင်တို့ မယ်တို့ ဘာများပြောကြမလဲဟင်!
မောင်တို့ မယ်တို့ ဘာများပြောကြမလဲဟင်!
Posted by ခင်ခ on Feb 4, 2013 in Facebook, Health & Fitness | 39 comments
ခင်ခ ဖေ့ဘုတ်ထဲမှာ ကျန်းမာရေးသတင်းလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်။
အဲဒီဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းလေးကို ကျန်းမာရေးအမြင်ဖြင့် ဗဟုသုတ မျှဝေတင်လိုက်မယ်။
ကဲကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရင်သားကင်ဆာ တားဆီးရေး အတွက် ကိုယ်စွမ်း ရှိသလောက် ကူညီကျတာပေ့ါ ဟုတ်တယ်မလား California ပြည်နယ်က Berkeley တက္ကသိုလ်မှာ ဒီသုတေသန ကိုဦးဆောင်တဲ့ သူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Gautham Venuhopalan က Cell တွေအပေါ် ဒြပ်ရှိတဲ့ ဖိအားပေး မှုက နဂိုမူလ ဖွံ့ဖြိုးမှု လမ်းကြောင်းထဲ ပြန်ထိမ်း ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ စမ်းသပ်မှုတွေက တစ်ဆင့် တွေ့ရှိ ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက် အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ Cancer ဖြစ်နိုင်မယ့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားသာ စေပါတယ်။
Posted By Vandever Keneshiroz
ဘယ့်နှယ်မှ မဘယ့်နှယ်နိူင်တဲ့ ကိစ္စကြီးပါလား ၊
လိုဂိုလေးဆွဲ… တီရှပ်လေးဝတ်ပြီးတော့ လမ်းဆုံလမ်းဂွလေးတွေမှာ… မဲရုံလိုကန့်လန့်ကာလေးနဲ့ ရုံသေးသေးလေးတွေဆောက်ပြီး…
ဟေ့လူ .. ဖက်တီးကပ်ဂျီးး
ခညား မိန်းမ ခေါ်နေဒယ် ..
လာဂဲ့ .. တုတ်ကြီးကြီး ကောက်ခဲ့ .. ဒဲ့ …
ဘာပေါရမှန်း သိဝူးး အဟီးး
ဘာမှမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲ အံဇာဒုံး ရေ…
ဒုတ်ကြီးကြီး ကောက်ခဲ့ လို့မောင်ရင့် ကိုပြောလိမ့် မယ် ……
ခုတလော ဒီအကြောင်းပဲ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေပါလား
“ကဲ စာဖတ်သူတို့ ရင်သား Cancer ရောဂါ ပပျောက်ဖို့ များများ ညှစ်ကြစို့။”..ဆိုပဲ
သေချာတာကတော့ မဒမ်မိုက်တစ်ယောက် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမရှိတော့တာပဲ..
ဘယ်နှယ့်မှ မဘယ့်နှယ်နိုင်သူ ကိုမျိုးသန့်ရေ ဦးဆုံးကွန်မန့်အတွက်ကျေးဇူးဗျာ။
နေစမ်းပါအုံး ဘာလို့ မဘယ့်နှယ်နိုင်တာလဲ စဉ်းစားကာကြိုးစားကြည့်ပါလား သူများကျန်းမာမယ့် အရေးမို့ပါ။
ကိုဖက်အကြံပေးလေးတော့ကောင်းတယ်ဗျ၊ ဒါပေမယ့် ကမ်းပိန်းက အချိန်နဲ့ဝင်ကြေးကောက်ရမယ် ထင်တယ်နော် တော်ကြာနောက်ကတန်းစီတဲ့သူတွေ ကားလမ်းပိတ်သလောက်ဖြစ်လို့ ပွမ် ပွမ် တွေ မည်ကုန်အုံးမယ်လေ။
သြော် ကိုအံစာတုံးရယ် တစ်ခုခုတော့ပြောခဲ့ရောပေါ့၊ ပြောချင်ရက်နဲ့ အောင့်ထားတာ မကောင်းမှာစိုးမိတယ်လို့ပါ။
P chogyi ရေ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ အကြောင်းမို့လည်း တင်မိတာပါ။
ကိုကြီးမိုက်တို့ မဒမ်ကို ချစ်လိုက်တာနော်၊ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်မဒမ်ကို ချစ်ပါ၏။
သူတို့တွေကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေချင်ကြတာပါ ဟုတ် တယ်ဟုတ်။
ဘယ့်နှယ်မှ မဘယ့်နှယ်နိူင်တာကတော့ ဘယ့်နှယ်စရာမှ မရှိလို့ပေါ့ဗျာ ၊
ကိုယ် အသုံးမကျတာတွေလည်း လူသိကုန်ပါပြီ ဆရာရယ် ၊
ကဲ ကဲ ကျန်းမာလိုသူများ ဆက်သွယ်ပါ လို့ ပြောရအောင်ကလည်း မဟုတ်
လှည်းတန်းမှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းသွားသူက လက်ရှိ လှည်းတန်းမှာ နေ နေသူကို ဒုက္ခပေးသလိုပါပဲလားကွယ်
ဟောသည့် မောင်ကျောက် ဝိတ်ကျအောင် အနမ်းချွေစရာမရှိသလို…
ကောင်မလေးတွေကို ရင်သားကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကူညီချင်တာမှ အရမ်း…
သူ့ရို့က မောင်ကျောက် စေတနာကိုသဘောမပေါက်ရင် အချုပ်ထဲရောက်မှာ ဆိုတော့….
ညှစ်ဖူးတယ်… ညှစ်ဖူးတယ်.. ညှစ်ဖူးတယ်… အော်မလွယ်ဝူး ယူးနိုင်ဒယ်…
ကိုကျောက်ရဲ့ စေတာနာကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ရှိလာမှာပါဗျာ။ ခဏလေးဘဲစောင့်……။
ယူးလောက်အောင်တော့ မညှစ်နဲ့လေ နည်းနည်းလျော့ပါအုံး ဂီ့ ရေ။
ဟုတ်ကဲ့ နိုး ရီပလိုင်းပါဗျာ မခိုင်ဇာရာ။
ဟိုက်!!!!!!!! လေးခ ပြေးပေါက်တွေ မွှားကုန်တော့ မှာဘဲ ငါးပါးမှောက်ပါပြီတော့
“ဒေါင်းဥခန့်မျှ အိမွမွကို ခွက်ဝပန်းရည် ဆုပ်နယ်သည်သို့ ..” ခုတင် ကိုကြီးကျောက်တုံးရေးထားတာ..
တကယ်လည်း.. အပျိုကြီးတွေ.. ရင်သားကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စည်းထားသူတွေ.. ရင်သားကင်ဆာအဖြစ်များတယ်လို့.. ဖတ်ဖူးတယ်..။
ရင်သားကင်ဆာအဖြစ်လျှော့အောင်လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းထဲလည်း.. လှည့်ရစ်ပြီး..ဆုပ်နယ်ရတယ်လို့.. မြင်ဖူးတယ်..။
လူသားသဘာဝမှာကိုက.. ရင်သားဟာ.. ကလေးသူငယ်တွေနို့ချိုတိုက်ကြွေးဖို့နဲ့.. ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့.. မိန်းမတွေမှာရှိနေတာပါတဲ့လေ..။
တွင်းသင်မင်းကြီး – “နှစ်ဆူလဝန်း၊ ဝိဒေကျွန်းက၊ ပေါ်ထွန်းသော့ယောင်၊ ရွှေနန်းချောင်ဝယ်၊ အရောင်ပေါင်းစု၊ စောမုဒု၏။ ဖွံ့နုပျို့ပျို့၊ ရွှေရင်စို့ကို ….”
ဦးယာ – “ပန်းရင်ဝတ်တွင်၊ လက်တော်သွင်း၍၊ မြဆင်းယှက်ဖြာ၊ ကြောစိမ်းမြွှာလျက်၊ လက်ျာရစ်စု၊ မွေရှင်နုနှင့်၊ ဒေါင်းဥခန့်မျှ ၊ အိမွမွကို၊ ခွက်ဝပန်းရည်၊ ဆုပ်နည်သည်သို့ ….”
ဒေါင်းနွယ်ဆွေ – ရွှေသဗျစ်ခိုင် လေလာယိုင်နွဲ့ မှဲ့မှဲ့ဝင်းဝင်း သီးခင်းပြွတ်ပြွတ် ပင်လုံးညွှတ်ခါ ဆွတ်လာသခင် ခေါ်သည်ပင်သို့ ရွှေရင်မို့မို့ စို့စို့ဖူးဖူး ခူးရန်မဝံ့ ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား ရင်သားဝင်းဝါ နုနုသာတည့် …။
နဂိုကမှ အဲသာဒွေကိုကြည့်မိရင် ရင်တုံပန်းတုံ ဖြစ်ရတဲ့အထဲ….
တဂျီး ကလည်းဗျာ.. နည်းတာပေါ့
“ဒေါင်းဥခန့်မျှ အိမွမွကို ခွက်ဝပန်းရည် ဆုပ်နယ်သည်သို”့ ..ဆိုတာ ကိုကျောက်က စာအဖြစ်သာရေးတာ..သူတစ်ကယ် စိတ်ဝင်စားတာက…
”ကျွဲကောသီးမျှ ခပ်၀၀ကို” ဖြစ်ပါတယ်…..
“သင်္ဘောသီးဆိုဒ် ခပ်မိုက်မိုက်” တွေလည်း ကြိုက်တယ်တဲ့…
”အုန်းသီးလောက်နီး ခပ်ကြီးကြီး ” ကိုလည်း လက်မလွတ် ချင်ပါတဲ့…
ကိုကျောက်ရေ……………. ပြေးပြီခင် ဗျ….
မင်း အတွက် ပါကွာ……………
ခုတစ်လော ရွာသားဒွေဘာဖစ်… ကျမ်းမာရေးတယ်ဂရုစိုက်
ဟိုဘက်မှာလဲ အူးကျောက်က ဗျို့ဟစ်ထားတယ် …
ဒီဘက်မှာလဲ…. အူးခ ဆောင်းတွင်းမှာ စိတ်တွေ ကတိမ်းကပါးဖစ်တယ်ထင်တယ်…
မိဗုံရယ် ပြေးခိုင်းတာ ဟုတ်ဘူးလေကွယ် ကိုယ့်ချစ်သောသူနဲ့ စကားလေး ဘာလေး အေးအေးဆေးဆေး ပြောပေါ့နော်……..။
ရင်တုံကင်းဝေး စိတ်သက်လေးမို့ လူတိုင်းရင်မှာ ဂိုးရိုစ့်ပါတဲ့…. ဘာမှဟုတ်ဘူး ကြော်ငြာ ၀င်တာပါ ကိုကျောက်ရေ။
မင်း အတွက် ပါကွာ……………ဆိုတဲ့ နိုဇိုမိရေ ကျေးဇူးပါဗျဘဲပြောရမယ်ပေါ့။
Wow ရယ် ဆောင်းတွင်းအိမ်မက် ကယောက်ကယက် ဆိုရိုးရှိတယ်လေ။
မင်း အတွက် ပါကွာ…………… ဆိုတာ
သူတို့ ကျန်းမာရေး အတွက် ကူညီ ခါနီးကျရင် သူတို့ကို ရှင်းပြပေးဘို့ပါနော
မယ်တို့ ကဘာပြောမယ်မသိပေမဲ့ ….
မောင်တွေကတော့ “ဆရာဝန်ကလဲညွှန်းတယ်၊ ရောဂါလဲပျောက်မယ်၊ ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်” ဆိုတော့ကာ…
ပြောလိုက်တော့မယ် “ညှစ်ကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း” .. ဒန့် .. တန့် … တန့်
myanmarcitizen ရေ ဆရာဝန်ညွှန်းတယ် ဆိုပြီးအနိုင်တော့မကျင့်နဲ့နော် ညှိုညှိုနှိုင်းနှိုင်းလေး လုပ်တတ်ဖို့တော့ လိုတယ်ဗျ။
၀ုတ်ဂဲ့ .. ၀ုတ်ဂဲ့ … ပါ … ကိုခင်ခ …
တို့သဂျီးက ဒီလိုဖက်မှာတော့ စပါယ်ရှယ်လစ်ပဲ..ကျမ်းကိုးနဲ့ကိုလာတာ
ကိုခင်ခရေ ကင်ဆာရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတါက်တော့ကောင်ပါတယ်
အဓိကကတော့ မမတွေ ညလေးတွေက ကျွန်တော်နားမှာရှဝူးဂျ
သာသာလေး ဖွဖွလေး ဆုတ်ကိုင်ပေးရမတဲ့
ချိုချိုစို့ တဲ့အခါ ဇွတ်မလောရဘူးတဲ့
သစ်ရွက်ပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ ပျားရည်စက် တစ်စက်ကို လျှက်ယူသလိုမျိုးပဲတဲ့
ကြားဖူးနားဝ ဖတ်ဖူးတာလေး ပြန်ရှဲပေးလိုက်ပါတယ်
ကျန်းမာရေးအတွက် လို့ ပဲ မှတ်ယူဖတ်တော်မူကြပါနော
ဒီသတင်းလေးကို ကျုပ်လည်း ဖေ့ဘွတ်မှာတော့တာတော့ ကြာပြီဗျ။
ကိုယ်တင်တဲ့ ပို့စ်အတွက် ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်သေးလို့ ရွာထဲမှာ မတင်တာပါ
အခု ကိုခင်ခက တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ ကျုပ်ကပဲ ကြားဝင်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးပါ့မယ်။
အထက်ပါ ပို့စ်အတွင်းမှ အကူအညီများကို မောင်မိုဘိုင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့
ဖရီး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ရွှီး ရွှီ ရွှီး
ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းးးး (လက်ခုတ်တီးသံများ ၊ အားပေးသံများ )
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး က မန်းဂေဇက်ကို စာလာဖတ်တဲ့
လိင်တူချစ်သူများအားလုံး မိုဘိုင်းအား လိုက်ရှာကြတော့မည် ဟု သတင်းရရှိပါသည်
ကျေးလက်တောရွာက..ကာလသမီးခေါင်း.. ဖွားဖွား..ကြီးကြီး.. ဒေါ်ဘုမ..ဒေါ်ဝက်မတို့.. သားသည်အမေတို့တွေလည်း.. တန်းစီနိုင်ပါပြီတဲ့..။
( အမြင်မတော်ရင်လည်းဖျက်ဗျာ ဘာရယ်တော့ဟုတ်ပါဘူး အဲ့သည်သဘောကိုလည်းတွက်ရမှာကိုး )
၀င်ရောက်ကာ အားပေးကွန်မန့်လေးတွေ အတွက်ကျေးဇူးဗျို့။
ကိုအောင်ပုရေ အရှိန်မလွန်ခင် ဘရိတ်အုပ်ဖို့တော့ လိုသပေါ့ဗျာ။
ကိုမိုဘိုင်းတစ်ယောက်တော့ လက်ရောင်လိုက်မှာ မြင်ယောင်သေးသဗျို့။
thaung htutsoe ရေ အနီးအနား မရှိငြားရင် ရှိသည့်နေရာ သွားပါဗျာ။
ဆရာပေတစ်ယောက်ကတော့ နည်းလမ်းလေးညွှန်ထား အမိုက်စားပါလား။
ဟာဂျာ ဦးခင်ခကြီးက ဘာတွေကြော မှန်းရဲတိဘူး၊တားတားကောင်မလေး အယောင်ပျောက်ဆေး တွေဘာတွေလူးရလို့ ကတော့ ဦးခင်ခ ကြီးနဲ့ တွေ့ မယ်။ဟီး……
အမလေး Thet Aung ရယ် နမူနာတောင် လာညှစ်ပြရမလိုဘဲ၊ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ဆို အယောင်ပျောက်ဆေး မသုံးရလောက်ဘူးထင်ပ။
ဦးဦးခင်ခ ပထမအကြောင်းအရာ အမျိုးသားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးက အမျိုးသမီးတွေကူညီမှဖြစ်မှာ ကင်ဆာကာကွယ်ရေးအတွက် နှိပ်နည်းတွေက အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေး ပြောပါရစေ
ဟုတ်ပါတယ် မိမိကိုယ်တိုင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိအချင်းချင်းနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိချစ်သူနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိအိမ်ထောင်ဘက် နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အဓိက ( ကဲ စာဖတ်သူတို့ ရင်သား Cancer ရောဂါ ပပျောက်ဖို့ များများ ညှစ်ကြစို့ ) လို့ဘဲ တိုက်တွန်းတာပါ။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေက မိမိ ချစ်သူတွေကို ပိုဂရုစိုက် ချစ်တတ်ကြလို့ပါ Moe Z ရေ။
ဘယ်ဘက်က တစ်ထောင် ညာဘက်က တစ်ထောင်
နိုင်ပါ့မလား ဟရို့ :hee:
The Huffington Post | By Ron Dicker	Posted: 12/18/2012 2:57 pm EST | Updated: 12/18/2012 3:53 pm EST
“Squeezing” malignant breast cancer cells could help to guide them back toanormal growth pattern, according to new research from UC Berkeley and Lawrence Berkeley National Laboratory.
Instead of the typical drug-focused methods, the manipulation of cell development through physical force shows for the first time that “mechanical” pressure alone can revert and stop the out-of-control growth of cancer cells,” the university wrote inarelease.
The school noted that the genetic mutations behind the malignancy remain, “setting upanature-versus-nurture battle in determiningacell’s fate.”